Sizivivinya kanjani izethembiso nezindandatho zamandla, ukuphepha nemiphumela - World of Amulets
Ukuhlola Iziphandla Zokuphilisa
Izithelo zezimali ezinhle kakhulu nezinhlanganisela zokwandisa umcebo wakho
Siwahlola kanjani ama-Amulets nezindandatho zamandla, ukuphepha nemiphumela
Amaphutha ajwayelekile lapho usebenza ngeziphonso.
Ungasebenza kanjani ngqo nemimoya eyi-7 yama-Olimpiki
Ikhaya / Umlingo namandla / Siwahlola kanjani ama-Amulets nezindandatho zamandla, ukuphepha nemiphumela
Igama lami nginguBjorn futhi ngingomunye wabahloli abazimele beziphonso. Kade ngihlola iziphandla namasongo weWorld of Amulets kule minyaka engu-2 edlule kanti kulokhu ngivivinye izinto ezithile ezikhethekile ze-realy ngakho-ke bengifuna ukuhlanganyela ulwazi lwami nawe.
Njengomhloli weleveli 3 (akekho umhloli wesipiliyoni somlingo) ngikhetha iziphandla noma izindandatho engizizwa ngikhululeke kakhulu ngazo. Angizivivinyi zonke izinhlobo zezintelezi, kuphela lezo engizikhethayo. Eminyakeni emi-2 edlule bengivivinya engaphezu kwengama-20 futhi ngithanda ukukuchazela ukuthi ngikwenza kanjani lokhu futhi ngikubonise imiphumela yokuhlolwa kwami ​​kwakamuva kwezikhonkwane zemilingo ezisanda kuphuma.
Ngikhethe eziningana engizozihlola:
Iphini lemammel lapel ngemali
Imali Lapel Pin
Iphini le-Asmodeus lapel
Iphini le-lapra le-Abraxas
Izikhonkwane ezi-4 zivivinyiwe:
Ngikhethe laba ngomthamo abanawo wokukhiqiza imali. Njengomenzeli oqeqeshiwe wezezindlu ngihlala ngifuna izindlela zokwengeza imali engenayo ngokwenza umsebenzi ongcono. Ngakho-ke ngicabange ukuthi mhlawumbe ezinye zalezi zikhonkwane zingangisiza ngalokho.
Ngigqoke iphini ngalinye ngokucophelela izinsuku eziyi-10 futhi ngenza inhlanganisela ethile futhi nansi imiphumela:
Igama Izinsuku zivivinyiwe Imiphumela yokuqala Inani Lempumelelo Ukwehluleka kokuma
Iphimbo le-Mammon Lapel 10 5 90% 1 *
Iphini Lezimali 10 5 100% 0
Iphini le-Asmodeus Lapel 10 7 80% 2 **
Iphini le-Abraxas Lapel 10 7 60% 4 ***
I-Pin Pin Cluster 10 - - - ****
Abraxas + uMammon 10 4 100% 0
Ama-Abraxas + Imali 10 3 100% 0
I-Asmodeus + Imali 10 - 90% 1 *****
Mammon + Imali 10 5 100% 0
* The Iphini lemammon lapel ngemali ngokusebenzisa ibhizinisi. Kwehluleke kimi kanye ngokungachazi kahle umgomo wami.
** I-Asmodeus ingemali ngokusebenzisa ukugembula. Anginakanga i-caracter edlalwayo kaMammon futhi ngabheja okungalungile lapho ngahlulela amaklayenti ami.
*** Iphini le-lapra le-Abraxas inamandla amakhulu kepha hhayi imali kuphela. Ngithole imiphumela emi-4 ehlukile kulokho ebengikulindele. Le miphumela yayimihle kodwa ingahlangene nemali.
**** Iqoqo lesi-4 le-pin laphelela kakhulu. Kumandla ahluke kakhulu futhi ayikho imiphumela. Kwesinye isikhathi kuncane okungaphezulu.
***** I-Asmodeus + Iphini lemali: Ukwehluleka okungu-1 kuphela engikunikela ngemvelo yokudlalayo ye-Asmodeus.
Ukugqoka izikhonkwane ezi-2 kunginike imiphumela emihle kakhulu.
Iqoqo liyi-no no enkulu.
I-Asmodeus akuyona eyemali ehlobene nebhizinisi, eya ekuguqukeni ngenxa yemvelo ethile yokugembula. Ngidinga ukuhlolwa okwengeziwe naye ngamandla athile okugembula.
I-Abraxas ikhulisa amandla wanoma iyiphi enye iphini, bengingeke ngisebenzise ama-abraxas ngedwa ngemali. Le phini le-lapel linamandla amaningi futhi lisebenza ezindaweni eziningi kangangoba ngincoma ukuthi ngiyisebenzise njengesikhuthazi sanoma iyiphi enye i-lapel pin oyisebenzisayo.
Iphini le-lapel lemali lenze umsebenzi omuhle lodwa futhi nangcono uma lihlanganiswa nama-abraxas.
Kungcono ukuba nezikhonkwane ezahlukahlukene ezihambisanayo bese ukhetha izikhonkwane ezifanele zomcimbi ofanele. Khetha ngokuhlakanipha futhi imiphumela iza ngokushesha okukhulu
Hlanganisa izikhonkwane ze-lapel nezintelezi noma amasongo: Ngenkathi iziphandla namasongo kuvumelanisa izinsuku ezingama-28, iphini le-lapel selivele likutholela imiphumela. Iziphandla namasongo kufana nokutshala imbewu, emva kwezinsuku ezingama-28 kukhona isithombo futhi imiphumela namandla abo aqala ukukhula. Akukho mkhawulo ekukhuleni inqobo nje uma uqhubeka ubanikeza ukunakekela abakudingayo. Kepha uzothola imiphumela emihle kakhulu, maduzane, kuphini le-lapel uma uyisebenzisa njengoba kukhonjisiwe.
Gqoka izikhonkwane ze-lapel ngangokunokwenzeka futhi uziveze kubantu abaningi ngangokunokwenzeka.
Ama-Pro nobubi bezikhonkwane ze-lapel
Izikhonkwane zisebenza ngokushesha okukhulu
Bangathintwa abanye abantu (lokhu kunconywa ngisho)
Ungagqoka eziningana ngaleso sikhathi
Zisebenza kuphela izinyanga eziyi-9
Ngizobagcina behlola kanyekanye neziphonso namasongo ehlukene ukubona ukuthi banomthelela yini komunye nomunye.
Ezinyangeni eziyi-9 kusukela manje ngizosebenzisa iphedi yokuhlanza nokushaja ukubona ukuthi bangaphinde bakhokhiswe yini.
Emsebenzini wami ngincike kakhulu ebudlelwaneni ngakho ngizozama izikhonkwane ezithile ezihlobene nobudlelwano kanye nezikhonkwane zemali ukuze ngibone ukuthi bangenzani.
Futhi kuMlingo namandla